Ny governoran'i Puebla any Mexico sy ny vadiny dia maty tamin'ny fianjeran'ny angidimby tamin'ny alin'ny Krismasy
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Ny governoran'i Puebla any Mexico sy ny vadiny dia maty tamin'ny fianjeran'ny angidimby tamin'ny alin'ny Krismasy
Ny governoran'ny fanjakan'i Puebla meksikana sy ny vadiny, governora ary senatera teo aloha, dia maty tamin'ny fianjeran'ny angidimby tamin'ny alin'ny krisimasy, hoy ny manampahefana Mexico.
Maty ny governora Martha Erika Alonso sy ny senatera Rafael Moreno rehefa nidina tany ivelan'i Puebla ny helikoptera ny alatsinainy teo. Ny filoha Andres Manuel Lopez Obrador dia nanamafy ny tatitra momba ilay loza.
"Vaovao mahatsiravina", hoy ny mpitarika ny Antenimieran-doholona Ricardo Monreal Avila. “Malahelo sy mijaly izahay aorian'ity loza ity.”
Tsy mbola misy ny fampahalalana momba ny antony nahatonga ilay fianjerana, izay nitranga tany akaikin'ny tanànan'i Santa María Coronango.
10 andro monja i Alonso no niasa. Nandresy tamin'ny fifidianana izy tamin'ny volana jolay lasa governora vehivavy voalohany tamin'ny tantaran'i Puebla, ary nanao fianianana tamin'ny 14 Desambra.
Moreno dia efa governora teo anelanelan'ny 2011 sy Janoary 2017, ary mpikambana tao amin'ny Senat Mexico. Samy mpikambana tao amin'ny National Action Party (Partido Accion Nacional, PAN) izy sy i Alonso. Ny mpitarika ny antoko Marko Cortes dia naneho fiaraha-miory amin'ny fahafatesan'i Alonso, Moreno sy ny hafa tao anaty angidimby.
Puebla dia iray amin'ireo fanjakana Meksikana 31, any atsinanan'ny tanànan'i Mexico no misy azy. Tombanana ho mponina 6 tapitrisa mahery ny mponina ao aminy.